OSD အပိုင်းအစယာဉ်မက်လုံးပေးအကြံပြုချက်! | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်OSD အပိုင်းအစယာဉ်မက်လုံးပေးအကြံပြုချက်!
03 / 01 / 2020 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, မော်တော်ယာဉ်, တူရကီ
မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (OSD) ၏ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌ Haydar Yenigünသည်နှစ်ကုန်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးလူသိများသောအပိုင်းအစများအတွက်လူသိများသည်“ သက်ကြီးရွယ်အိုယာဉ်များလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ် bulundu ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Haydar Yenigünက ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လမှစတင်၍ အစီအစဉ်စတင်လည်ပတ်ချိန် မှစ၍ ယာဉ်ကြောမှကားအစီးပေါင်း ၄၀၀,၀၀၀ ကျော်အားဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်ဟုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းကိုပြည်တွင်းစျေးကွက်ပြန်လည်ရှင်သန်လာမှု၊ စီးပွားရေးအတွက်အထောက်အကူပြုမှု၊ ယာဉ်အသွားအလာလုံခြုံမှုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ထိခိုက်လွယ်မှုအားလုံးအထက်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသောလျှောက်လွှာတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, တူညီသောမော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူပြောင်းလဲမှု၏အခွအေနေကိုဖယ်ရှားခြင်း, များစွာသောအခြားနိုင်ငံများရှိသကဲ့သို့စဉ်ဆက်မပြတ်အစီအစဉ်အဖြစ်ကုသ, ဒါမှမဟုတ် 2018 ပြီးနောက်ရေတိုဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ဆက်လက်ခံရခြင်းအားဖြင့်အပိုင်းအစမက်လုံးပေးအစီအစဉ်၏အကြောင်းအရာ, တူရကီ၏ပို့ကုန်၏ 400 ရာခိုင်နှုန်း, သိသိသာသာအထောက်အကူပြုစီးပွားရေး။ ဒါဟာကိုယ်စားကိုယ်စားပြုသည်။ Haydar Yenigün, အစီအစဉ်သည်မျှဝေထားသောအရေးကြီးသောအဆိုပြုချက် ၄ ခု၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်။
အပိုင်းအစများအတွက်မက်လုံးအဖြစ်လူသိများသော "သက်ကြီးရွယ်အိုယာဉ်များလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ် bilinen" ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်အကုန်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းစျေးကွက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးချနိုင်သည့်အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏အမြင်များကိုမျှဝေသူမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (OSD) ဥက္ကChairman္ဌ Haydar Yenigünကပြောကြားရာတွင်အရေးကြီးသောကိန်းဂဏန်းများကိုမျှဝေစဉ်အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုအရေးကြီးသောအကြံပြုချက် ၄ ခုယူဆောင်လာခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောအခွန်စည်းကြပ်မှုအစီအစဉ်နှင့်အတူနို ၀ င်ဘာလတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောအခွန်စည်းမျဉ်းများသည်စျေးကွက်ကျဆင်းမှုကိုနှေးကွေးစေသည်ဟု Haydar Yenigünကပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းစျေးကွက်၊ စီးပွားရေး၊ ယာဉ်အသွားအလာလုံခြုံမှုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများအားလုံးအားပြန်လည်ရှင်သန်ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအသုံးချမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, တူညီသောမော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူပြောင်းလဲမှု၏အခွအေနေကိုဖယ်ရှားခြင်း, များစွာသောအခြားနိုင်ငံများရှိသကဲ့သို့စဉ်ဆက်မပြတ်အစီအစဉ်အဖြစ်ကုသ, ဒါမှမဟုတ် 2019 ပြီးနောက်ရေတိုဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ဆက်လက်ခံရခြင်းအားဖြင့်အပိုင်းအစမက်လုံးပေးအစီအစဉ်၏အကြောင်းအရာ, တူရကီ၏ပို့ကုန်၏4ရာခိုင်နှုန်း, သိသိသာသာအထောက်အကူပြုစီးပွားရေး။ ဒါဟာကိုယ်စားကိုယ်စားပြုသည်။
ယာဉ်ကြောမှဖျက်သိမ်းလိုက်သောအပိုင်းအစ ၄၀၀၀၀၀ ကျော်
ယင်းအစီအစဉ်သည်ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင်ရောင်းချမှုကိုသိသာစွာအထောက်အကူပြုကြောင်းဖော်ပြပြီး OSD ဥက္ကChairman္ဌ Haydar Yenigünက“ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇွန်လအထိယာဉ်အသွားအလာမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ယာဉ်အရေအတွက်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှမေလအတွင်းယာဉ်ကြောမှ ၂၂,၀၀၀ ၆၇၄ စီးအားဖျက်သိမ်းခဲ့သော်လည်းဇွန်လမှဒီဇင်ဘာလအတွင်းယာဉ်အသွားအလာမှတ်ပုံတင်ထားသူ ၁၈၀,၀၀၀ ၃၀၆ ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ 2018 ၏ပထမဆယ်လတွင်မှတ်ပုံတင်မထားသောယာဉ်အရေအတွက်သည် ၂၂၄,၂၃၄ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောယာဉ်များကိုမော်တော်ယာဉ်အသစ်များဖြင့်အစားထိုးသည်ကိုလက်ခံပါကဖျက်သိမ်းခြင်းကိုအားပေးသည့်အပလီကေးရှင်းကစျေးကွက်အတွင်းကျုံ့ခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်၊ အပိုင်းအစတွေနဲ့အခွန်ဖြတ်တောက်မှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဈေးကွက်ထဲမှာကျုံ့ဝင်သွားတာပေါ့။
၎င်းတို့သည်ရှိပြီးသားသက်ကြီးရွယ်အိုများမော်တော်ယာဉ်အပြန်အလှန်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ဟိုင်ဒ်၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အရေးကြီးသောအကြံပြုချက် ၄ ခုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီး OSD ဥက္ကHay္ဌ Haydar Yenigünကဤအကြံပြုချက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြခဲ့သည် -
အစီအစဉ်၏ပါ ၀ င်မှုတွင်ကားအမျိုးအစားတူယာဉ်များကိုလဲလှယ်ရန်လိုအပ်ချက်ကိုဖယ်ရှားရန်၊ အထူးသဖြင့်ကားနှင့်ကားမောင်းသောယာဉ်များကိုခြစ်ခြင်းနှင့်အသစ်သောကားသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ယာဉ်အမျိုးအစားများဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်တူညီသောအမျိုးအစားရှိယာဉ်များ ၀ ယ်ရန်လိုအပ်ချက်ကိုဤအမျိုးအစားများအတွက်ဖယ်ရှားသင့်သည်။
စွန့်ပစ်ရမည့်ယစ်မျိုးခွန်ပမာဏကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်သောထုတ်လွှတ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများမှအပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
စျေးနှုန်းမြင့်မားမှုနှင့် SCT နှုန်းသည်အနိမ့်ကျသည့်အလွန်လေးသောစီးပွားဖြစ်မော်တော်ယာဉ်အုပ်စုတွင်သက်ရောက်မှုအကန့်အသတ်ရှိသည့်အပိုင်းအစအားမက်လုံးပေးခြင်းအားဤမော်တော်ယာဉ်အုပ်စုအတွက်ပါ ၀ င်မှုတိုးမြှင့်စေရန်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။
အစာရှောင်ခြင်းအလုံအလောက်သငျသညျနှေးရထားရ Get | Bursa မြန်နှုန်းမီးရထား
အဆိုပါစီးတီးစင်တာတွင်ဖယ်ရှားခြင်းအပိုင်းအစ Tools များ
အပိုင်းအစ Tools များ TCI Manisa အတွက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်
ပျေါထှနျးခဲ့အပိုင်းအစမော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ မှစ. အနုပညာ
တူရကီမြို့တော်အပိုင်းအစ Tools များစုဆောင်းခြင်း